Booliiska Kenya oo Maanta soo bandhigay Magacyada iyo Sawirada rag Soomaali ah oo ku lug ahaa Weerarkii Westgate. | Salaan Media
Booliiska Kenya oo Maanta soo bandhigay Magacyada iyo Sawirada rag Soomaali ah oo ku lug ahaa Weerarkii Westgate.
Booliiska Dalka Kenya ayaa maanta soo bandhigay Magacyada iyo Sawirada labo nin oo Soomaali ah oo la rumeesan yahay in gacan mug leh ka geesteen Weerarkii Westgate Mall lagu qaaday bishii hore kaa ay masuuliyadiisa sheegatay Al-Shabaab.
Ragan Soomaalida ah ee soo bandhigeen Booliiska Kenya ayaa magacyadooda waxaa lagu sheegay Abdukadir Haret Muhamed oo sidoo kale loo yaqaan Maxamed Xuuseen ninkan ayaa la sheegay in uu kasoo jeedo Deegaanka Mandheera , qabiilkiisana waxaalagu sheegay Mareexaan waaana nin si fiican uga hadli karo Luqada Sawaaxiliga waxa uuna heestaa dhalashada Dalka Kenya , ninka kale ayaa isna lagu magacaabaa Hussein Abdi Ali waxaa isna sidoo kale loo yaqaan Aadan Deeq , iyo sidoo kale Abdulahi Subow.
Labadan Nin ee Soomaalida ee lasoo bandhigay Sawiradooda iyo Magacyadooda ayaa Booliiska Kenya waxa ay sheegeen in ay iibiyeen Gaarigii ay wateen Kooxdii Weerarkay Westgate Mall gaarigaa oo nuuciiso ahaa Mitsubishi lancer sumadiisuna aaheed KAS 575X.
Ragan ayaa gaariga ay iibiyeen waxa ay ka gadeen nin u shaqeeya Hay’adaha Qaramada Midoobay waxa ayna iibiyeen gaarigaasi bishii hore labo todobaad kahor inta aanan westgate Mall lagu qaadin weerarka
Booliiska Dalka Kenya ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in maalmo ka hor weerarkii Westgate ay kamarada CCTV ay qabatay ragan lasoo bandhigay iyagoo lacago kala baxaya Bangiga Barclays Bank oo kuyaal Magaalada Nairobi.
Dowlada Kenya ayaa balan qaad lacageed usameesay cidii soo sheegtay xog ku aadan labadan nin ee Soomaalida ah ee Booliisku ku raad joogaan waxaana Booliiska Kenya sheegeen in lasiin doono qofkii xogta ragaas keenta lacag gaareysa 500,000 oo shilink Kenya ah qiimaha ahaana ku dhaw 6-kun oo Dollar .
Dhinaca kale Ciidamada Booliiska Dalka Kenya ayaa shalay Goob basaska laga raaco waxa ay ka xireen Xaaska Abdukadir Haret Muhamed oo kamid ah labadan Nin ee la baadi goobayo waxaana lasoo sheegayaa in Booliisku su’aalo weediinayaan gabadhaasi.
Dowlada Kenya ayaa horey usoo bandhigtay Magacyada rag kale oo iyana la tuhmayo in ay ka qeyb qaateen weerarkii Westgate Mall lagu qaaday , waxaana ragan hada lasoo bandhigay si weyn looga baadi goobayaa gudaha Dalka Kenya.